Kheyraadka Raadinta iyo Goynta Wariyaasha iyo Saxafiyiinta
15 Kheyraad lagu Raadinayo laguna Raadinayo Wariyaasha iyo Saxafiyiinta
Axad, Abriil 2, 2017 Isniin, April 3, 2017 Douglas Karr
Xallinta Xalka Ag - Qeybaha wax soo saarka iyo adeegyada waxaa ku kalsoon hay'adaha iyo hay'adaha adduunka oo idil.
Qaniinyada PR - Waxaan u fududeynay ganacsiyada yar yar inay helaan kana jawaabaan fursadaha waaweyn ee warbaahinta.
Gorkana - Sirdoonka warbaahinta ugu dhameystiran uguna saxan UK.
Caawiya Weriye Dibedda ah - Laga soo bilaabo The New York Times, illaa ABC News, ilaa HuffingtonPost.com iyo qof kasta oo u dhexeeya, ku dhowaad 30,000 xubnood oo ka tirsan warbaahinta ayaa soo xigtay HARO ilo sheekooyinkooda. Qof walba khabiir buu ku yahay wax. Wadaagida khibradaada ayaa laga yaabaa inay kuusoo jiido fursada weyn ee warbaahineed ee aad raadineysay.
Weriye - Raadi saxafiyiinta oo arag waxay qorayaan.
Warbaahinta Kitty waa adeeg la bixiyo ($ 89.95 bishiiba) oo loogu talagalay xirfadleyda ganacsiyada inay la xiriiraan oo ay ku xirnaadaan saxafiyiinta iyadoo la adeegsanayo qoraal deg deg ah oo fudud. 9,704 saxafiyiin iyo PR PR oo firfircoon tan iyo 2001.
MediaOnTwitter - In la horumariyo ururada lala yeesho weriyeyaasha, qorayaasha iyada oo lala kaashanayo dadka kale ee warbaahinta iyada oo loo marayo Twitter. Raac iyaga iyo iyaga sida ugu cusboonaysiis marka laga hadlayo cusboonaysiinta shirkadda dhammaadkeeda. Laba hanti oo warbixin weyn ku leh dadka warbaahinta ah ee ku jira Twitter Media on Twitter.
The Saxaafadda Meltwater xiriirka software-ka softiweer-ahaan-adeeg wuxuu kaa caawinayaa inaad dhisto liisaska warbaahineed ee la bartilmaameedsaday, iyadoo la adeegsanayo raadinta kaliya ee joornaaliiste ah ee saxafi ku ah warshadaha. Raadi saxafiyiinta ku habboon sheekadaada iyadoo lagu saleynayo wixii ay qoreen xilliyadii la soo dhaafay, ka dibna u qaybi farriintaada emayl ama silig hal madal. Bixinta: Meltwater waa kafaala-qaade Martech Zone
Mucjiso (adeeg lacag bixin ah oo ka bilaabanaya $ 199 bishiiba) ayaa hogaaminaya dhaqdhaqaaqa si loo joojiyo spam-ka loo yaqaan 'PR' iyadoo saxafiyiinta lagu xakameynayo sanduuqa sanduuqa. On Muck Rack way fududahay in la helo saxafiga saxda ah, arag waxa ay qabtaan iyo waxa uusan daboolin, oo u dir iyaga garoonno ay rabaan inay arkaan.
Wararka La Xaqiijiyay waxay siisaa warbaahinta wararka adduunka xog ururin la raadin karo oo khubaro lagu kalsoonaan karo, wareysiyo diyaar u ah iyo fikrado sheeko oo la heli karo 24/7
Xusuus-qorista waxaa loo sameeyay si loo siiyo fursadaha PR fursad ay dib ugu eegaan ugana hadlaan waayahooda shaqsiyadeed saxafiyiinta qaaska ah.
ProfNet - Ma raadineysaa meelayn warbaahineed oo la kasbaday? Saxafiyiinta iyo dadka wax ku qora baraha internetka waxay kumanaan sheeko oo sheekooyin ah u diraan bil kasta kuwa isticmaala ProfNet. Warbaahintu ha kuugu timaado iyaga oo leh ProfNet.
Xiriirka Weriye waa mid aan dhawaan ku biiray, laakiin waxaan jeclahay qaabka emaylladooda iyo nidaamkooda jawaab celinta - aad uga horumarsan HARO.
WaxqabadkaSource - Macluumaadka Xiriirka Warbaahinta ee Boqortooyada Midowday - Raadi oo aqoonsato xiriirada tifaftirka ee ku habboon iyo fursadaha PR.
Dhalo - Waxaan ka caawinnaa saxafiyiinta & dadka wax qora inay wax ka helaan. Waxaan ka caawinnaa ganacsiyada & faa iidooyinka PR inay helaan xayeysiis bilaash ah.
Tags: agile pragileprqaniinyo prwariye bulldoghel suxufiyiinhel wariyayaalgorkanaharocaawi weriye dibeddajounralistedliiska saxafigasaxafiyiintawarbaahinta on twitterwarbaahinta prodhexdhexaadnimosaxaafadda meltwaterxabxabwar la xaqiijiyaygaroonkaqorista qoraalladaPR Gobolka Salalxariirxiriiriyaha wariyeliiska wariyesuxufiyiintaraadi bloggersraadiya suxufiyiintaraadi weriyeyaashaishailo leh
Daahfurka Lusso: Calaamadee Baabuur Qalaad oo Wadda Las Vegas Strip
Maxay yihiin Waxyaabaha Ugu Sareeya SEO-ga ee Sannadka 2017?
Aug 14, 2015 at 8: 50 AM
Waad ku mahadsantahay liiska kheyraadka, Karr! Ma garaneysaa wax adeeg ah oo ka socda dalal kale? Tusaale ahaan, Ruushka waa caan caan ah pressfeed.ru. Maxaa ugu caansan UK?